«F’iza no antoko be?» -
AccueilTresaka«F’iza no antoko be?»
10/02/2018 admintriatra Tresaka 0
Nahazo fanankianana avy amin’ny fanoherana ny antoko HVM hoe “antoko madinka sisa no manaiky hiaraka aminy”. Tsy hiditra lalina amin’izay resaka izay isika fa ny manitikitika ny saina fotsiny dia ny hoe “f’iza no antoko be?”. Iza amin’ny antoko politika eto amin’izao fotoana izao no sahy milaza fa “antoko be” na “antoko lehibe”?
Ny voka-pifidianana irery ihany no afaka mamaly izany fanontaniana izany, io voka-pifidianana io irery no mamaritra hoe “zatsy no antoko madinika”, “zaroa no antoko be na lehibe”. Samy te hiravaka sy te hilaza tena ho goavana daholo mantsy ny antoko rehetra eto amintsika kanefa tsy misy sahy mandatsaka kandidà rehefa tonga ny fifidianana. Ny fananan’ny antoko iray kandidà amin’ny fifidianana isan-tsojakiny no ahafahana milaza fa matanjaka ilay antoko, tsy vitan’ny hoe milatsaka hofidiana fotsiny ihany fa lany amin’izay seha-pifidianana nandraisany anjara.
Mampihomehy tokoa mantsy ny zava-misy eto amintsika. Izao olona rehetra manangana antoko izao dia mihevi-tena ho zava-dehibe daholo. Nandritra iny Tetezamita iny no tena nahitana io tranga io, nanangana antoko avokoa izao olon-drehetra izao mba nahazoana toerana tao amin’ny CT sy ny CST. Tsy manana olona mahafeno “gabone” akory anefa ny maro tamin’ireny antoko ireny ary tsy mahagaga raha aman-jatony ny isan’ny antoko politika eto amintsika.
Koa raha misy milaza fa “antoko madinika sisa no manaiky hiara-dia amin’ny HVM”, dia aoka izy antoko lehibe mba hiseho vahoaka hiaraha-mijery! Izany antoko lehibe izany mantsy raha ny tokony ho izy tsy mila vovonana akory ary afaka miatrika izy samy irery izay fifidianana rehetra eto amin’ny firenena. Hatramin’ny androany aloha, raha tsy diso ny fitadidiana, dia tsy mbola nisy antoko sahy nandeha irery niatrika fifidianana izany teto afatsy ny tamin’ny andron’ny revolisiona sosialista repoblika faharoa. Ny antony, tsy nisy afaka nihetsika tamin’izany fotoana izany noho ny jadona. Aleo ho avy ny fifidianana dia ho hita eo ireo mihevitra ny tenany antoko lehibe e!